Is Myanmar Safe? And Should You Go? - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Feb 02 2018 03:44 AM
Posted 02 February 2018 - 03:44 AM
Less thanadecade ago, most travelers avoided Myanmar on the advice of then-political prisoner Aung San Suu Kyi.
But after the country beganahalting transition to democracy in 2010—and Secretary of State Hillary Clinton visited in 2011—the destination quickly becameamust-visit darling of intrepid travelers as well as the media: “Burma, whose official name is Myanmar, may finally be emerging from halfacentury of isolation and brutal misrule" Brook Larmer wrote for Condé Nast Traveler back in 2012.
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေတယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါသလား။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်လောက်အထိတော့ ခရီးသွားအများစုဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကြံဥာဏ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ရှောင်ကျဉ်ခဲ့ကြတယ်။
၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီကို စတင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ဟီလာရီက ၂၀၁၁ မှာစတင်အလည်အပတ်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲအချိန်နောက်ပိုင်းကတည်းက မြန်မာပြည်ဟာ ခရီးသွားတွေကြားမှာ မဖြစ်မနေလည်ပတ်ရမယ့် နေရာတနေရာအဖြစ် အရမ်းကိုရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂မှာ ဘရူလာမာရေးခဲ့သလို တရားဝင်နာမည် မြန်မာဆိုတဲ့နိုင်ငံဟာ ရာစုနှစ်တ၀က်လောက် ခွဲခြားခံနေရာမှ နောက်ဆုံးမှ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
Also tagged with one or more of these keywords: tourists, Myanmar
Started by BurmeseNews , 17 Feb 2018 tourists